Turkiyaan loltoota isii gara Liibiyaa erguuf kan karoorfatte tahuu beeksiste - NuuralHudaa
Turkiyaan loltoota isii gara Liibiyaa erguuf kan karoorfatte tahuu beeksiste
Prezdaant Rajab Xayyib Erdogaan Khamiisa har’aa Ankaaraa keessatti akka ibsetti, gaaffii deeggarsa waraanaa mootummaan Liibiyaa beekamtii UN qabu Turkiyaaf dhiheesse irratti hundaayuun, mootummaan Turkiyaa loltoota lafoo Ji’a dhuftu keessa gara Liibiyaatti erguuf kan karoorfate tahuu beeksise. Prezdaant Erdogaan haasaya Kora AK Paartii irratti godhe kanaan, deeggarsa waraanaa Liibiyaaf godhamu ilaalchisee wixineen seeraa January 7/2020 Paarlaamaaf kan dhihaatu akka ta’eefi, Paarlaamaanis deeggarsa kana akka mirkaneessuuf abdii kan qabu tahuu hime.
Turkiyaa fi Mootummaan Liibiyaa muummicha ministeeraa Fayiz Al-Sarraajiin hogganamu,kanaan dura dhimmoota tikaa fi humna ittisaa irratti waliin hojjachuuf kan walii mallatteessan yoo tahu, Paarlaamaan Turkiyaa wixinee deeggarsaa kana ji’a dabre kan raggaasise tahuun ni beekama.
Walii galtee kana hordofuunTurkiyaan lola mootummaa Liibiyaa fi hidhattoota Jeneraal Khaliifaa Haftaar jiddutti geggeeffamaa jiru dhaabsisuuf, biyyoota naannichaa waliin kan hojjattu akka ta’eefi, gaaffiin deeggarsa waraanaa mootummaa Liibiyaa irraa yoo dhihaateef ammoo deeggarsa barbaachisu kan kennitu tahuu ibsaa turte.
Haaluma kanaan Turkiyaan humnoota Liibiyaa keessatti wal lolaa jiran jiddutti marii jalqabsiisuuf, biyyoota naannichaa irraa deeggarsa kan barbaadaa jirtu yoo tahu, Prezdaant Erdogaan Arba’aa kaleessaa gara Tuniiziyaa imaluun Prezdaantii biyyattii haaraya filatame Qayiis Sa’id waliin Tuniiz keessatti mari’atanii jiran.
Gamtaan waraana NATO bara 2011 Prezdaantii Liibiyaa duraanii Mu’ammar Qaddaafii humnaan aangoo irraa eega fonqolchee booda, Liibiyaan yeroo ammaa mootummaa beekkamtii UN qabu kan magaalaa Triipoolii maandheffatee fi garee miseensota Paarlaamaa magaalaa Tobruk jedhamtu keessa mandheffateen bulaa jirti. Humnoota lamaan gurguddoo Liibiyaa bulchaa jiraniin alattis gareewwan hidhattootaa heddu naannawa adda addaa kan too’atan yoo tahu, qabeenya boba’aa fi buufataalee doonii too’achuudhaaf wal dorggommii godhaniin biyyattiin dirree jeequmsaa taatee jirti.
Keessumattuu hidhattoonni “Waraana Biyyoolessa Liibiya” jechuun of moggaasan kan Jeneraal Khaliifaa Haftaariin hogganaman, April dabre irraa eegalee magaalaa Tripoolii too’achuuf duula jalqabaniin, hidhattoota mootummaa biyyattii beekkamtii UN qabu deeggaran waliin lola hamaa keessa galanii jiru.
Biyyoonni gara garaa ammoo faallaa walii dhaabbachuun deeggarsi hidhattootaaf kennaa jiran haala Liibiyaa wal xaxaa kan godhe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Sa’uudii, Emreets, Masri, Raashiyaa fi Faransaay Jeneraal Haftaar kan deeggaraa jiran yoo tahu, Qaxar fi Turkiyaan ammoo mootummaa beekamtii UN qabu deeggaraa jiraatuu gabaasaaleen gara garaa ni mul’isu.